Bakhala ngokuyamaniswa nokufa kukaMagaqa
ABOMBUTHO wamaphoyisa bekhipha ibhokisi sebeya emathuneni. Isithombe: Zanele Zulu
KAWUNEME umndeni wobeyiphini likasomlomo esiShayamthetho, uMnuz Mluleki Ndobe, ngezinkulumo zabantu abalokhu bemyamanisa nokubulawa kukaMnuz Sindiso Magaqa.
Lokhu kudalulwe ngumfowabo kamufi, uMnuz Mzoli Ndobe obekhulumela umndeni enkonzweni yokufihla umfowabo, ebiseNtlabeni Sportsfield eMzimkhulu, ngoMgqibelo.
Uthe umndeni ukhathazekile ngabamaphephandaba abalokhu bebhala ukuthi wake waboshelwa ukufa kukaMagaqa yize kwaziwa ukuthi amacala ahoxiswa kudala kuye.
Uthe lokhu kuvusa amanxeba angakapholi emndenini. Uthe ufuna ukuthi izwe lonke lazi ukuthi akusekho obekusathinta umfowabo ngecala lokufaka kukaMagaqa njengoba nabaphenyi bebesanda kubuyisa zonke izinto ababezithathile kumfowabo.
Ngokuzwa kwaleli phephandaba kuthiwa phakathi kwezinto ezazishaqwe ngoKlebe kumufi kukhona izibhamu nomakhalekhukhwini, konke okubuyiswe ngaphambi kokuba azidubule
umufi. Amaphoyisa athi umufi wazibulala ngesIbhamu sakhe esisemthethweni.
“Aseneme ngabezindaba ngokulokhu bethi uma bebhala ngokufa komfowethu, bathi lo owake waboshelwa ukufa kukaMagaqa. Ngifuna lazi izwe ukuthi umfowethu uhambe emhlabeni amaphoyisa esezibuyise zonke izinto zakhe ayezithathile. Lokho kucacisa ngokusobala ukuthi akukho obekusamthinta ngaleli cala,” kuchaza uNdobe.
Udalule nokuthi umfowabo wangenwa wukugula esavalelwe esitokisini, okwaphoqa ukuthi angeniswe esibhedlela sasejele kabili.
Umufi ufihlwe ngesizotha ngomngcwabo osezingeni likahulumeni, owaziwa nge-category 2. Ngenxa yemigomo yeCovid-19 bekungena abakhethiweyo kuphela etendeni ebeligxunyekwe enkundleni ebudebuze nasemzini wakhe eKoki.
Iningi ebelihambele umngcwabo bekungamalungu esiShayamthetho nawasePhalamende. Bekukhona nongqongqoshe besifundazwe nabakazwelonke okubalwa kubo uDkt Nkosazana Dlamini-Zuma noDkt Zweli Mkhize.
UDlamini-Zuma uchaze umufi njengobemnene kakhulu abebesenzisana naye njengoba bephuma esifundeni esisodwa, iHarry Gwala.
Ethula inkulumo yosuku undunankulu uMnuz Sihle Zikalala uthe ucela kube nobumbano esifundazweni.
Uthe uyazi ukuthi bekunezinkulumo ezithi uNdobe benoMagaqa bebengezwani kodwa egameni lokubahlonipha njengoba bengasekho nje makube nobumbano.
Umufi okuvele ukuthi ubephuma engena esibhedlela ngenxa yomdlavuza uzidubule phambi komndeni wakhe eGlenwood eThekwini ngesonto eledlule.